Adeegyada Customization OEM / ODM
PUAS waxay diiradda saartey cilmi baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda muuqaalka sare ee muuqaalka fiidiyowga ah, algorithms processing image, naqshadeynta wareegga isku dhafan, naqshada qalabka, qaab dhismeedka muuqaalka PTZ.
Iyadoo la adeegsanayo cilmi baaris cilmiyeed iyo horumarin xoog leh, waxaan ku siineynaa HD nidaamyada helitaanka muuqaalka shirarka fiidiyowga, nidaamyada waxbarashada, iyo masaafada HD xallinta nidaamka gunaanadka shirarka fiidiyowga. Ku dadaal inaad noqoto hogaamiye caalami ah ee baarista & horumarinta HD muuqaalka muuqaalka iyo nidaamka nidaamka.
PUAS waxay leedahay awooda R&D ka softiweerka ilaa qalabka, waxay bixin kartaa adeeg loo habeeyay. Iyada oo ku saleysan khibradda baarista iyo horumarinta kamaradda PTZ, PUAS waxay soo saari doontaa 4K fiidiyow iyo 3CCD xalalka tikniyoolajiyada.
Skype Emayl 0755-88361222
Geedi socodka is-gaadhsiinta
Kiiska alaabta kartoo
No content, fadlan sug ... ama nala soo xiriir!